Vaovao - Momba ny andro fisaorana !
Ny Amerikana ihany no mankalaza ny Thanksgiving
Ny Thanksgiving dia fety noforonin'ny Amerikana.Inona no atao hoe originality?Ny Amerikana ihany no niaina hatramin'izay.
Ny niandohan'ity fetibe ity dia azo jerena avy amin'ny "Mayflower" malaza, izay nitondra Puritains 102 izay nenjehina ara-pivavahana tany Royaume-Uni ka hatrany Amerika.Noana sy nangatsiaka ireo mpifindra monina ireo tamin’ny ririnina.Rehefa nahita fa tsy tafavoaka velona izy ireo, dia nanatona azy ireo ny Indianina ka nampianatra azy ireo hiompy sy hihaza.Izy ireo no nampifanaraka ny fiainana tany Amerika.
Tamin'ny taona ho avy, ireo mpifindra monina izay nihemotra dia nanasa ny Indiana hiara-mankalaza ny fijinjana, ary namorona tsikelikely ny fomban-drazana "fankasitrahana".
* Mampihomehy ny mieritreritra ny nataon’ireo mpifindra monina tamin’ny Karana.Na dia tamin'ny 1979 aza, nanao fitokonana tsy hihinan-kanina ny Indiana tao Plymouth, Massachusetts tamin'ny Andron'ny Thanksgiving mba hanoherana ny tsy fankasitrahana ny fotsy hoditra amerikana amin'ny Indiana.
Ny Thanksgiving no fety faharoa lehibe indrindra any Etazonia
Ny Thanksgiving no fety faharoa lehibe indrindra any Etazonia aorian'ny Krismasy.Ny fomba lehibe indrindra amin'ny fankalazana dia ny fihaonan'ny fianakaviana hihinana sakafo be, hijery lalao baolina kitra, ary handray anjara amin'ny matso karnavaly.
Eoropa sy Aostralia dia tsy natao ho an'ny Thanksgiving
Ny Eoropeanina dia tsy manana tantara nandeha tany Amerika ary avy eo nampian'ny Indiana, ka amin'ny Thanksgiving ihany.
Nandritra ny fotoana ela, raha miarahaba ny Britanika amin'ny Thanksgiving ianao, dia handà izany ao am-pony izy ireo - inona izany, tehamaina?Ireo miavonavona dia hamaly mivantana hoe: “Tsy inona izahay fa fety Amerikana.”(Fa tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia hanatratra ny lamaody koa izy ireo. Voalaza fa ny 1/6 amin'ny Anglisy dia vonona ny hankalaza ny Thanksgiving.)
Ny firenena eoropeanina, Aostralia ary firenena hafa dia natao ho an'ny Thanksgiving ihany.
Kanada sy Japon dia manana ny Andro fisaorana manokana
Amerikanina maro no tsy mahafantatra fa mankalaza Thanksgiving koa ny mpifanolobodirindrina aminy, Canada.
Atao ny Alatsinainy faharoa amin'ny Oktobra isan-taona ny Andron'ny Thanksgiving any Canada, mba hahatsiarovana an'i Martin Frobisher, mpikaroka britanika, izay nanorina tanàna tany Newfoundland, Kanada, tamin'ny 1578.
Ny 23 Novambra isan-taona ny Andron'ny Thanksgiving ao Japana, ary ny anarana ofisialy dia “Andron'ny Fisaorana Mazoto-Manaja ny asa mafy, mankalaza ny famokarana ary ny andro iraisam-pirenena fifanajana.”Lava ny tantara, ary fetin'ny lalàna.
Ny Amerikanina dia manana fety tahaka izao amin'ny Thanksgiving
Tamin’ny 1941, dia nanendry tamin’ny fomba ofisialy ny Alakamisy fahefatra amin’ny Novambra isan-taona ho “Andron’ny fisaorana” ny Kongresy Amerikana.Ny fetin'ny Thanksgiving amin'ny ankapobeny dia ny alakamisy ka hatramin'ny alahady.
Ny andro faharoa amin'ny Thanksgiving Day dia antsoina hoe "Black Friday" (Black Friday), ary io andro io no fiandohan'ny fividianana mpanjifa amerikana.Ny alatsinainy manaraka dia ho lasa “Cyber ​​​​Monday”, andro fihenam-bidy mahazatra ho an'ny orinasa e-varotra amerikana.
Nahoana no antsoina hoe "Turkey" ny turkey
Amin'ny teny anglisy, i Torkia, ilay sakafo malaza indrindra amin'ny Thanksgiving, dia mifandona amin'i Torkia.Satria manankarena amin'ny vorontsiloza ve i Torkia, tahaka ny fananan'i Shina an'i Shina?
TSIA!Tsy manana vorontsiloza mihitsy i Torkia.
Ny fanazavana malaza dia hoe rehefa nahita voalohany vorontsiloza teratany tany Amerika ny Eoropeanina dia noheveriny ho karazana vorona guinea.Nanafatra vorona guinea tany Eoropa ny mpivarotra Tiorka tamin’izany, ary nantsoina hoe Turkey coqs izy ireo, ka ny Eoropeanina dia niantso ny vorona ginea hita tany Amerika hoe “Turkey”.
Noho izany, ny fanontaniana dia hoe, inona no antsoin'ny Tiorka ny vorontsiloza?Nantsoin'izy ireo hoe-Hindi, izay midika hoe akoho indiana.
Jingle Bells dia hira ho fankalazana ny Thanksgiving tany am-boalohany
Efa nandre ny hira “Jingle Bells” (“Jingle Bells”) ve ianao?
Tsy hira Krismasy mahazatra ilay izy tamin'ny voalohany.
Tamin’ny 1857, dia nisy sekoly alahady iray tany Boston, Etazonia, naniry hanao Thanksgiving, ka i James Lord Pierpont no namorona ny tononkira sy ny mozikan’io hira io, nampianatra ny ankizy hihira, ary nanohy nanao ny Krismasy nanaraka izany, ary farany dia nanjary nalaza manerana ny firenena. izao tontolo izao.
Iza moa ity mpamoron-kira ity?Izy no dadatoan'i John Pierpont Morgan (JP Morgan, anarana sinoa JP Morgan Chase), mpamatsy vola sy banky malaza amerikana.
satroka golf dada satroka snapback satroka flat peak satroka dada Custom embroidery logo dad satroka papa sport cap